घट्दो शेयर बजारमा यसरी गर्नुहोस् सुरक्षित लगानी | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण घट्दो शेयर बजारमा यसरी गर्नुहोस् सुरक्षित लगानी
on: १० भाद्र २०७५, आईतवार ०७:०२ लेख | दृष्टिकोण
घट्दो शेयर बजारमा यसरी गर्नुहोस् सुरक्षित लगानी
अहिलेसम्मको नेपाली शेयरबजारको इतिहास हेर्दा १–२ वर्षबाहेक प्रत्येक वर्षको असार, साउन र भदौ महीनालाई शेयरबजारमा हरियाली छाउने महीनाका रूपमा बुझिन्छ । अर्थात् शेयरबजारका लागि सिजनको महीनाका रूपमा बुझिन्छ । प्रकृतिले पनि यी महीनालाई हरियाली महीनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, दुर्भाग्यको कुरा यसपालि यी तिनै महीनामा नेपालको शेयरबजारमा महाखडेरी परेको छ । खडेरीले पात सुकेर शेयरबजारको वातावरण उजाड भएको छ । असार साउनमा त खडेरी प¥यो प¥यो, भदौ महीना पनि त्यति राम्रो होला जस्तो अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई हेर्दा देखिँदैन । शेयरबजारसँग सम्बन्धित सबै पक्ष सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कम्पनीहरूले धमाधम राम्रो प्रतिवेदन निकाल्दै छन् । कतिपय कम्पनीले त वार्षिक साधारणसभा र बोनस पनि घोषणा गरिसकेका छन् । बैङ्कहरूले बचतको ब्याजदर घटाइसकेका छन् । अब शेयर कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन शुरू गर्ने नै छन् । धेरै बैङ्क तथा बीमा कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजी पु¥याइसकेका छन् । अब कम्पनीहरूको हकप्रद शेयर कम आउनेछ । बजारमा शेयरको अत्यधिक आपूर्ति रोकिनेछ । केही महीनापछि नेपालको शेयरबजारले प्रविधिमा ठूलो फड्को मार्दै छ । पूर्णरूपमा अनलाइन ट्रेडिङ आउँदै छ तर पनि बजार निरन्तर घटिरहेको छ । कुनै पनि देशको शेयरबजारको एउटा साइकल वा चक्र हुन्छ । नेपालको शेयरबजारमा पनि ५/६ वर्षको एउटा साइकल हुन्छ । अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्दा २०७३ साल साउन १२ गते नेपालको शेयरबजार १८८१ को बिन्दुमा पुगेर एउटा चक्र पूरा गरी त्यहाँबाट फर्केको शेयरबजार कहिले माथि कहिले तल गर्दै अहिले १२०० को वरिपरि घुमिरहेको अवस्था छ । अहिले नेपालको शेयरबजार बियरिस अवस्थामा छ । यसबाट लगानीकर्तालाई के कुरा अवगत हुनुपर्छ भने अर्थतन्त्रका सूचक र शेयरबजारसँग सम्बन्धित पक्ष सबै सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि बजार बियरिस अवस्थामा रहेको छ भने नेप्से बढ्न कठिन हुँदो रहेछ । अहिले सरकारलाई वा अर्थमन्त्रीलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि शेयरबजार आप्mनो चक्रमा घुमिरहेको अवस्थामा बजार बियरिस चक्रबाट चल्दै छ भन्ने कुरा बुभ्mनुपर्छ । बजार घटनुमा केही हदसम्म अर्थमन्त्रीको बोलीको प्रभाव पनि होला । तर, अहिलेको बजार घटाइ बजारको चक्रअनुसार हो भन्ने पुराना लगानीकर्ताको ठम्याइ छ ।
अहिले सिजनका महीनामा पनि यसरी निरन्तर बजार घटिरहेको देख्दा नयाँ र साना लगानीकर्ता अत्तालिएका छन् । नेपाली लगानीकर्तामा बजार घट्नेबित्तिकै आत्तिहाल्ने र बजार बढ्नेबित्तिकै उत्साहित हुने प्रवृत्ति छ । शेयरबजारमा बुझेर नभई अरूको लहलहैमा लागेर लगानी गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय हुँदा यो समस्या देखिने गरेको हो ।
अहिले निरन्तर घटिरहेको बजारमा कसरी लगानी गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई न्यून जोखीम हुन्छ भन्ने कुराहरूको विश्लेषण गरौं ।
शेयरबजार बुलिश ट्रेण्डतर्फ उन्मुख हुँदा प्रायः लगानीकर्ता अझ नाफा कमाइन्छ भनेर बजारमा छिर्ने गर्छन् । तर, आफूले लगानी गरेको शेयरमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गरेको अवस्थामा बजारबाट नाफा बूक गर्दै निस्कनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अझ बढी नाफा गर्छु भनेर लोभमा परेर नाफा भइसकेको शेयर च्यापेर राख्नु घातक हुन सक्छ । त्यस कारण लगानीकर्ताले लगानीपूर्व नै एउटा योजना बनाउनुपर्छ– यति प्रतिशत नाफा आएपछि मैले शेयर विक्री गर्नेछु । शेयरबजारमा लगानी गर्दा सही समयमा सही निर्णय हुन नसक्दा घाटा हुन सक्छ । आफू कतिसम्म घाटा बेहोर्न तयार छु भन्ने कुराको विचार गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।
अहिले बजारमा शेयरको मूल्य धेरै सस्तो भएको छ । शेयर सस्तो हुँदैमा त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन नसक्ने अनि महँगो हुँदैमा बढी प्रतिफल दिने भन्ने धारणा गलत हो । सस्तो मूल्यको शेयरले आगामी दिनमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ भने महँगो मूल्यको शेयरले उचित प्रतिफल नदिन पनि सक्छ । त्यस कारण महँगो मूल्य हुँदैमा राम्रो कम्पनी र सस्तो मूल्य हुँदैमा नराम्रो कम्पनी भन्ने हुँदैन ।
कम्पनीको अवस्था र सञ्चालकको लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण :
कम्पनीको विगत ५ वर्षको वित्तीय प्रतिवेदनलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी कम्पनीको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन कस्तो छ ? कम्पनीले कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ? कम्पनी कसरी अगाडि बढ्दै छ ? कम्पनीले बजारमा कस्तो प्रस्तुति गर्दै आएको छ ? आदि विषय अध्ययन गरेर मात्र उक्त कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुपर्छ । कम्पनीका सञ्चालकमा कस्ता व्यक्ति छन्, उनीहरूले लगानीकर्ताको हितका लागि काम गर्दै आएका छन् कि छैनन् ? कम्पनीले कमाए पनि नाफा नबाँडी आपैm राख्ने सञ्चालक र गलत नेतृत्व भएका संस्थाको शेयरमा भएको लगानीले सही प्रतिफल दिन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा शेयर लगानी गर्दा मूल्य आम्दानी अनुपात १५ गुणाभन्दा कम भएका र प्रतिशेयर आम्दानी १५ रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु सुरक्षित हुन्छ । जगेडा कोष रित्तो वा अति कम भएका र मूल्य आम्दानी अनुपात धेरै भएका कम्पनीको शेयर छ भने त्यस्ता कम्पनीको शेयरलाई तुरुन्तै विक्री गरी जगेडा कोष बलियो भएका र मूल्य आम्दानी अनुपात १५ गुणाभन्दा कम भएका कम्पनी जो भविष्यमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी बोनस शेयर दिने हैसियत राख्छन् । त्यस्ता कम्पनीका शेयरमा लगानी गर्नु ज्यादै बुद्धिमानी ठरिनेछ ।
अहिलेको अवस्थामा लाभांशको आकलन गरी सस्ता शेयरमूल्य भएका तर राम्रा कम्पनीहरूको शेयरमा विविधीकरण गरी लगानी गर्नु ज्यादै बुद्धिमानी हुन्छ । खासगरी प्रतिशेयर नेटवर्थको हाराहारीमा शेयर मूल्य भएका १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने हैसियत राख्ने, क्रमशः प्रगति गर्दै गएका कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु ज्यादै सुरक्षित र उपयुुक्त हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा सस्तो मूल्यमा शेयर किन्ने मौका छ भनेर कम्पनीको आर्थिक अवस्था र लाभांश आकलन नगरी जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीको शेयर कौडीको भाउमा पाए पनि खरीद गर्नु हुँदैन ।
अहिलेको घट्दो बजारमा शेयरमा लगानी गर्दा आफूसँग भएको पैसा एकैचोटि लगानी नगरी दैनिक घटेको बजारबाट थोरै थोरै राम्रा राम्रा कम्पनीका शेयर उठाउँदै जानु बुद्धिमानी हुनेछ ।
यी विषयबाहेक कम्पनीले प्रत्येक वर्ष सन्तुलित दरले लाभांश दिएको छ कि छैन ? कम्पनीको कमाइ निरन्तर बढिरहेको छ कि छैन ? संस्थागत सुशासन छ कि छैन ? हकप्रद शेयरलाई भन्दा बोनस शेयरलाई जोड दिँदै आएको छ कि छैन ? नगद लाभांश र बोनस शेयर मिलाएर दिँदै आएको छ कि छैन ? आदि विषयमा विचार पुर्‍याएर अहिलेको घटेको बजारमा लगानी गर्न सकियो भने शेयरबजारबाट केही समयपछि मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
त्यसकारण अहिलेको घट्दो शेयरबजारमा माथि उल्लिखित विषयहरूलाई मनन गर्दै अरूको लहलहैमा नलागी आफै कम्पनीका बारेमा बुझेर बजारका पुरानो अनुभवी लगानीकर्ताको सल्लाह लिएर लगानी गर्नुहोस् । अहिलेको लगानीले लगानीकर्तालाई छिटै प्रतिफल दिनेछ । अहिले रोपेको आँप छिट्टै फल्नेछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहोस् ।
लेखक नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घका उपाध्यक्ष हुन् ।